Fodiamandry – Nilaozan’i Gérard Rakotoasimbola ihany koa ny piano - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fodiamandry – Nilaozan’i Gérard Rakotoasimbola ihany koa ny piano
55 taona i Gérard Rakotomalala izao nodimandry izao
Namoy olomanga indray ny tontolon’ny kalon’ny fahiny. Nodimandry ny alin’ny alarobia teo amin’ny faha-55 taonany i Gérard Rakotoasimbola, rehefa nolazoin’ny homamiadan’ny tenda, nandritra ny fotoana naharitra. Mpanakanto sy tarika maro no nitondrany ny talentany tao anatin’ny taona maro : ny tarika Kintana telo, Ossy, Lecky, Rasamielojaona Wilson, Richard Ranaivoson, Romule, JJ Tseheno, Gaston Andrianony, Ramaroson Wilson, J. Andriamanantena, André Titis, Ramananjanahary Albert, Ludger Andrianjaka…
Nanabe sy nampita ny fitiavana ny kalon’ny fahiny tamin’ny tanora ihany koa i Gérard Rakotoasimbola, ka anisan’ireo taizany sy nobeaziny tamin’izany i Sitraka (Pazzapa), izay anisan’ireo tanora liana amin’ny kalon’ny fahiny.
Ny sabotsy izao no handevenana ity mpanakanto ity eny amin’ny fasan-drazany eny Antsampandro Ilafy. Izahay eto amin’ny Ao Raha dia mirary fiononana ho an’ny fianakavian’Itompokolahy.
CSB Antananarivo – Fety nandritra ny roa andro tetsy amin’ny Maray Masay(0)
Tafiditra tamin’ireo hetsika nanombohana ny faha-55 taonan’ny THB. Fety nandritra ny roa andro no notanterahina tetsy amin’ny Marais Masay ny faran’ny herinandro teo. Ny sabotsy maraina anefa dia efa nisy ny hetsika nanoloana ny Jumbo Score tetsy Ankoron­drano. Nandritra izany dia maro tamin’ireo nandalo tamin’iny lalana iny no variana tamin’ny dihy nataon’ireo ankizy izay nandray anjara tamin’ilay dihy tambabe. Ankoatra ny fiarahana tamin’ny toerana maitso noravahin’ireo latabatra sy elo menan’ny THB dia nampiavaka ny roa andro tetsy amin’ny Marais Masay ny fanehoana ireo mpanatrika ilay rakitsarin’ ny THB, Soa ny fiarahantsika vaovao. Nisokatra ho an’ny rehetra ihany koa ny Karaoke, izay nentina niala voly, ka tsy nije­rena ny fahaizana na tsia mifehy ny teknikan’ny hira. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny lalao sy loka samihafa natolotra ireo mpanjifa tao anatin’ny roa andro. Faly Ran.
« Seho tokana » – Goavana sy nanakoako ny fiderana niarahana tamin’ i Dayvide (0)
Fampisehoana tamin’ny sehatra lehibe voalohany teto Antananarivo. Goavana sy nanakoako ny fiderana niarahana tamin’i Dayvide tamin’ilay “seho tokana” sy Dayvide ranoray notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, omaly tolakandro. Sehatra goavana voaravaky ny loko mavokely sy mainty no nandraisan’ity mpanakanto ity ireo mpijery tonga maro nameno ny antsasaky ny lapan’ny Fanatanjahantena. Nanjaka tao anatin’ny fampisehoana ny hira sy ny fihetseham-po satria dia matetika no latsa-dranomaso i Dayvide noho ny fihetanam-po na tamin’ny hira na tamin’ny fiarahana nikalo tamin’ireo mpijery. Goavana ny fampisehoana satria dia mpanakanto an-jatony no niara-dia tamin’i Dayvide tamin’ny fampisehoana. Tao anatin’izany ireo antoko mpihira izay nanome vokatra niavaka tamin’ny hira gadona “pink” nefa nahitana ny feo lafika mamelona fanahy. Tamin’ny ankapobeny dia niarahan’i Dayvide nikalo tamin’ireo nanotrona azy ny ankamaroan’ireo hira, raha tsy hitanisa afa-tsy izay tena nampihetsi-po toy ny “afon’ny fanahy”, “Mpamonjy”, “Mitomany mafy”… Fahombiazana, araka izany, ny seho voalohany teto Antananarivo ho an’i Dayvide. Hitohy amin’ny fitetezam-paritra ny hetsika hiarahana amin’ity mpanakanto ity. FR
Faty olona, Mpanoratra Rijakely, 11.01.2013, 18:15	FIARAHAMONINA
Toetr’andro manerana ny nosy – Haharitra hatramin’ny alahady ny orana sy erika ary rivotra(0)
Fanavaozana sarintany – Mety hisy fiovana ireo anaran- tanàna mitovy eto amintsika(0)
Tsenan’ny kilonga – Hisy fampahafantarana ireo kilalaon’ny ankizy(0)
Fananganan-tsaina – Hampaneno lakolosy fanairana ny fokontany sasany(0)
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	Manan-tsaina…tsisy saina!
Lozam-pifamoivoizana – Lehilahy 18 taona maty voahitsaky ny kamiao
Toamasina – Trano fivarotana volamena notafihin’ny jiolahy
Vono olona tetsy Ankadikely Ilafy * Namboraka ny antony namonoany ny dadatoany ireo zanak’anabaviny